अन्तर्वार्ता Archives - Silichung.com
भोजपुर । भोजपुर सदरमुकाममा लामो समयदेखिको खानेपानी हढ्ने भएको छ । खानेपानीको शिलान्यास भएसँगै भोजपुर सदरमुकाममा खानेपानीको समस्या हट्ने आशा बढेको हो । नेपाल सरकारको ७० प्रतिशत, नगरविकास कोषको ऋण २५ प्रतिशत र स्थानीय उपभोक्तको ५ प्रतिशत गरि कुल रुं ४९ करोड, ७९ लाख ९८ हजारमा आयोजनाको निर्माण कार्य शुरु भएको हो । आय...
संखुवासभा जिल्लामा पछिल्लो समय शापु रोगका विरामि देखा पर्न थालेका छन् । यसै सन्र्दभमा हाम्रा सहकर्मीले तेज रत्न आँखा तथा कान उपचार केन्द्र संखुवासभा खाँदबारीका इज्चार्ज छितिज बरालसंग यस रोगको विषयमागरिएको कुराकानि प्रस्तुत गरिएको छ । शापु भनेको के हो ? शापु (SHAPU) एक दृष्टि नाशक आँखाको रोग हो । यो रोग प्रायः ...
नेपाली समाजमा लाहुरे सँस्कृतिको छुट्टै विशिष्टता र विशेषता छ । दुईसय बर्षदेखि नेपाली समाजमा हुर्केको लाहुरे सँस्कृति अझै पनि जीवन्त छ । त्यही साँस्कृतिक मनोविज्ञानले नेपाली समुदायमा गहिरो प्रभाव पारेको छ । विशेष गरी यो साँस्कृतिक मनोविज्ञानले किशोर उमेरबाट युवावस्थामा प्रवेश गरिसक्दा धेरै उथलपुथल आउँछ । यसले विकल्पहीन ...
विराटनगर । प्रदेश नं १ मा आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा कूल वार्षिक बजेटमा ५८.१५ प्रतिशत वित्तीय प्रगति भएको प्रदेश कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय विराटनगरले जनाएको छ । वार्षिक बजेट रु ३६ अर्ब ४३ करोड १० लाख ४० हजारमा रु २१ अर्ब १८ करोड ३७ लाख ६० हजार खर्च गरेर सो प्रगति हासिल गरेको हो । कार्यालयका अनुसार सो अवधिमा पू...
नरेश काङमाङ समकालीन नेपाली साहित्यका फरक विधाको अध्येताको रुपमा चिनिन्छ । भोजपुरको टेम्के मैयुङ–४ नागी स्थायी घर भएका काङमाङ अहिले बेलायतको लण्डनमा बसोवास गर्दै आएका छन । बाल्यकालदेखि नै कविता लेखनमा सक्रिय काङमाङ पुर्व वेलायती सैनिक समेत हुन । बेलायती सैनिक जीवनमा रहँदा उनले युद्ध कविता लेखन शुरुवात गरेका थिए । जसबाट ...
झाक्री बा’को नामले परिचित उपेन्द्र सुब्बाको जन्म २०३० सालमा पाँचथरको आङ्गसराङ्गमा भएको हो । जयनारायण आदर्श मा बि मेहेल्बोटे, पान्थरमा पढ्दादेखि नै साहित्य र कला क्षेत्रमा विशेष चासो राख्दै आउनु भएका सुब्बा यति वेला साहित्य क्षेत्रमा परिचित नाम हो । हाल तीन वटा कविता संग्रह, एक कथा संग्रह र एक दर्जन नेपाली चलचित्रको...
भोजपुर । महिलाहरुको हालसम्मका आन्दोलनबाट प्राप्त अधिकार संस्थागत र बाँकी अधिकार प्राप्तिका लागि आफ्नो उम्मेदवारी रहेको नेकपा एमालेका समानुपातिक उम्मेदवार सृजना राईले बताएकी छिन । मिडिया सेन्टर भोजपुरले आयोजना गरेको साक्षत्कार कार्यक्रममा आफ्नो धारणा राख्दै राईले यस्तो बताएकी हुन् । नेकपा एमालेबाट प्रदेश तर्फका समानुपा...
नेपाली कांग्रेसको युवा भातृ संगठन नेपाल तरुण दलका उपाध्यक्ष उत्तम चापागाई आसन्न निर्वाचनमा प्रदेश सभा तर्फ भोजपुर क्षेत्र नं. १ का उम्मेद्वारका दावेदार समेत थिए । तर, पार्टीले संघीय समाजवादी फोरसँगको गठबन्धनपछि फोरम सचिव अजम्बर काङ्गमाङ्गलाई अघि सारेको छ । भोजपुरमा लोकतान्त्रिक गठबन्धनको चुनावी अभियानमा वक्ताका रुपमा द...
भोजपुर नगरपालिकाका मेयर कैलाशकुमार आलेको जन्म वि.सं. २०३६ सालमा मध्यम खालको पारिवारिक पृष्ठभुमीमा भएको थियो । सानैदेख इमान्दार र कर्तव्यनिष्ठ छवि बोकेका आले वि.सं. २०५१ सालमा विद्योदय मावि पढ्दा नेपाली कांग्रेस निकट विद्यार्थी संगठनमा अध्यक्ष भएदेखि राजनीतिमा पुर्ण रुपमा होमिएका हुन् । उनी भोजपुर बहुमुखी क्याम्पसमा वि....
आसन्न हुने स्थानीय तह निर्वाचनमा जिल्लाको उत्तरी षडानन्द नगरपालिकामा नेपाली कांग्रेसबाट मेयरका उम्मेदवार विरबल राई नेपाली कांग्रेसका पुराना नेता हुन । नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेवीच तीब्र प्रतिस्पर्धा हुने आकलन गरिएको छ । नेपाली कांग्रेसबाट मेयर पदका उम्मेदवार बनेका विरवल राईसंग उनको उम्मेदवारीको बिषयमा मोहन दुरालले ...